“Waa nasiib-daro iyo khalad labaad in qoyska (Fagadhe) oo aan wax loo qaban la hoosaasiyo” | Somaliland.Org
December 30, 2009	Hargeysa (Somaliland.Org)- Axsaabta Mucaaradka ah ee UCID iyo KULMIYE, ayaa ka jawaabay aragtidooda ku saabsan warar sheegaya in Xukuumaddu diiday in Hargeysa lagu aaso maydka Danjirihii Somaliland u joogay dalka Faransiiska oo maalmo ka hor ku geeriyooday Paris.
Qoyska marxuum Maxamuud Saalax Nuur (Fagadhe), waxay sheegeen in Xukuumadda oo markii hore u sheegtay inay ka war sugaan ay habeen hore ku wargelisay in maydka Marxuumka lagu aaso dalka uu ku geeriyooday ee Faransiiska.
Hase yeeshee, Afhayeenka xisbiga UCID Xassan Xusseen Maxamed (Codyare) oo uu xalay Wargeyska Ogaal wax ka waydiiyay siday xisbi ahaan u arkaan arrintaas, waxa uu nasiib-daro ku tilmaamay in Xukuumaddu ka gaabiso habaynta aas qaran oo marxuum Fagadhe loo sameeyo. “Marka hore, xisbi ahaan waxaanu umadda reer Somaliland ka tacsiyadaynaynaa geerida marxuumka, waxaananu leenahay Illaahay samir iyo iimaan ha inaga siiyo. Wuxuu ahaa nin qaali ah oo hore dalka ugu soo shaqeeyay ama halgankii raggii ka qaybgalay oo uu ka mid ahaa. Sidoo kale, sooyaalkii siyaasadeed ee Somaliland raggii hawlbowlaha u ahaa buu ka mid ahaa – ilaa waqtigaana madax buu dalka ka ahaa, mar Guddoomiye kuxigeen buu xisbi ka ahaa, haddana Safiir buu dalka u noqday. Markaa ninkaa taariikh nololeedkiisa marka la raaco, wanaagiisa ayaa aad u badnaa, nin aqoonyahan ahna wuu ahaa. Xaq buu ugu leeyahay dalka Somaliland in maydkiisa halkan (Hargeysa) la keeno. Waxaanu aaminsanahay in aas qaran loo sameeyo oo dalka lagu aaso, maantana wayba daahdaye (raagtay) waxay ahayd in maalintii uu dhintayba habayn loo sameeyo oo ilayn dadka kaleba waatii la keenayaye, in maydkiisa la soo qaado, halkan lagu aaso, dadka ehelka ah ee uu ka baxayna ku samraan, Somaliland-na ka qaybgasho aaskiisa,” ayuu yidhi Afhayeenku.
Mar la waydiiyay siday u arkaan dhawaaqa ka soo yeedhay qoyska Marxuum Fagadhe ee ku saabsan in Xukuumadda oo markii hore u balanqaaday inay sugaan oo ay soo qaadayso maydka, ay habeen hore ku wargelisay inay qoys ahaan dalka Faransiiska ku aastaan, waxa uu ku jawaabay; “Waa nasiib-daro….Waxaanu ku tilmaami karnaa inay nasiib-daro tahay, weliba iyadoo aan waxba loo qaban in la hoosaasiyo, waana khalad labaad. Markaa waxaanu Xukuumadda kula talinaynaa in aanay ninkaa qoys ku riixin, balse ay iyadu xilkaa qaado oo maydkiisa la keeno, si dalka loogu aaso.”
Dhinaca kale, Xoghayaha guud ee xisbiga KULMIYE Keyse Xasan Cige oo aanu dhinacooda wax ka waydiiyay dhawaaqa qoyska Danjirihii geeriyooday, waxa uu sheegay in aanay Xukuumaddu kaalintii looga baahnaa ka qaadan abaabulka iyo soo qaadista maydka Marxuumka. “Taasi waa mid meesha ku jirta way muuqataa, laakiin ilaa hadda wax labada dhinac rasmi ahaan uga soo baxay ma hayno oo ku saabsan halkan (Hargeysa) lagu aasayo iyo in halkaas (Faransiiska) lagu aasayo midnaba,” ayuu yidhi Xoghayuhu. Wuxuuna intaa raaciyay; “Isagu (Safiirka geeriyooday) sida laga soo weriyay wuxuu ku dardaarmay in dalkiisa hooyo la geeyo, waxayna ahayd in la tixgeliyo, ilayn wuxuu ahaa nin wayn oo masuul ah, xil dawladda u soo qabtay oo qaranka abaal ku leh’e, waxayna ahayd in codsigiisii la tixgeliyo oo dalka lagu aaso, ilayn isku maamuus maaha oo maamuuska dalkiisa ayaa wax walba ka qiimo badan. Markaa taas lafteeda waxaad moodaa in laga dhego-adaygay, waayo haddii arrintan loo dhego-nugul yahay hadda muu gaadheen. Markaa runtii waxaan u arkaa hagrashaa meesha ka muuqato.”
Xukuumadda Somaliland ayaa ka gaabsatay inay ka hadasho arrintan, hase ahaatee, waxa jira Warar sheegaya in Xukuumaddu ay ku gacan-saydhay bixinta kharashka Diyaaradda Maydka Marxuum Fagadhe Paris ka soo qaadaysa, taas bedelkeedana ay kharashka bixinayaan Muwaadiniin iyo Qurba-joogga Somaliland qaarkood.